Home News Ururka Al Shabaab oo la wareegay Deegaanka Goofgaduud Buureey
Ururka Al Shabaab ayaa Saaka la wareegay gacan ku heynta degaanka Goofgaduud Buureey oo qiyaastii 30 KM dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay.
La wareegitaanka Shabaab ee degaanka ayaa timid ka dib markii Saakay Aroortii ay kusoo qaadeen Weerar ku bilowday Qaraxyo, waxaana la sheegay in ay si buuxda ula wareegeen Saldhiggii Ciidanka dowladda ee degaankaasi.
Taliyaha Ciidamada degaanka Goofgaduud ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in Ciidanka dowladda ay degaanka Iskaga soo baxeen, islamarkaana ay uu jiro Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay Qaraxyo iyo Weerarka degaanka.
Previous articleDowladda Federaalka oo ciidan u direysa Baydhabo si ay u soo qabtaan Roobow (Nog)
Next articleHowlgalo ka socda Magaalada Boosaaso kadib qaraxii xalay ka dhacay Magaaladaasi
Qaar ka mida koontooyinka Gobolka Banaadir oo la xiray sabab?
10 bisha ka dib oo Kheeyre kurbo Baarlamaanka dhankiisa ah u...